अबको २ वर्षसम्म सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने हुन सक्छ- डाक्टर पाण्डे - Nepalese Times
ओलीको पालामा जारी भएका यी ६ अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट फेरि जारी, कुन अध्यादेशमा के छ ?9मिनेट अघि
अबको २ वर्षसम्म सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने हुन सक्छ- डाक्टर पाण्डे
डा. रवीन्द्र पाण्डे ९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १२:११ (1 वर्ष अघि) ६०५ जनाले पढ़िसके
हिंजो म कामबिशेषले बैंक गएको थिएँ । हप्तामा १-२ दिन सिमित शाखा सिमित समयको लागि खुल्ने भएकोले बैंकमा ठूलो भीड थियो । च्यानल गेटभित्र उभिएर पालो अनुसार बोलाउने गार्ड र ग्राहकबीच १ फिटको पनि दुरी थिएन ।
कुनै स्टाफले माथिबाट मुख हेर्न मिल्ने गरि मास्क लगाएका थिए, कुनै स्टाफले नाकको तल तथा घांटीमा मास्क लगाएका थिए | ग्राहकसंग कुरा गर्दा आधा फिटको दुरी पनि देखिएन ।
ग्राहक तथा स्टाफले प्रयोग गर्ने टेबुल १ फिटको थियो होला । दुवै पक्षले मास्कभित्रबाट बोल्नुपर्दा आवाज सुन्न टाउको जोड्नुपर्ने बाध्यता देखिन्थ्यो | उही टेबल, उही डटपेन, उही चेकबुक, उही रजिस्टर प्रयोग सबैले गरिरहेका थिए । कोरोना संक्रमणको त्यो जोखिम हटाउन बैंकहरुले बिशेष ब्यबस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
– हरेक स्टाफको PCR टेस्ट गर्ने । संक्रमित देखिए आइसोलेसनमा राख्ने ।
– कोरोना संक्रमण भएका ग्राहक पनि बैंकमा आउछन् । तसर्थ सहि तरिकाले मास्क, पंजा, चस्मा र हेड क्याप लगाउने ।
– ग्राहकसंग ६ फिटको दुरी राख्ने ब्यबस्था मिलाउने ।
– डटपेन, खानेपानीको बोतल लगायतका सामग्री सेयर नगर्ने ।
– छुट्टाछुट्टै टेबल ( स्टाफ र ग्राहकको ) को ब्यबस्था गर्ने ।
– ग्राहकले सहि तरिकाले मास्क लगाउने, बाहिर र भित्र २ ठाउमै अनिबार्य ह्याण्ड स्यानिटाइजरले हात सफा गर्नुपर्ने, मोबाइल फोन, कि रिंग, पर्स आदि टेबुलमा राख्न नपाइने ..ब्यबस्था गर्ने ।
– कागजका झोलामा पैसा लिने / दिने व्यवस्था मिलाउने ।
बैंक स्टाफ र ग्राहक कोरोना संक्रमणबाट बच्ने सबैभन्दा अचुक उपाय व्यक्तिगत दुरी हो । हरेक बैंकले । ६ फिटको दुरी कायम गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु अनिबार्य छ । हामीले १-२ बर्षसम्म सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तसर्थ माथि उल्लेखित ब्यबस्था र अभ्यास गर्नुको बिकल्प छैन ।